खाली पेटमा लिच्ची खाँदा मृत्यु | Nagarik News - Nepal Republic Media
१ फाल्गुन २०७३ ५ मिनेट पाठ
त्यस क्षेत्रमा लिच्चीको उत्पादन भारतभरि नै बढी हुन्छ। लिच्ची बगैँचामा काम गर्ने कैयौँ मजदूर तथा लिच्ची बगैँचा वरपरका बालबालिकाहरुले आफ्नो भोक शमन यही लिच्चीले गर्ने गरेका कारण सोही बेला लू पनि चल्ने कारणले दोहोरो मारमा बालबालिका पर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
शोधकर्ताका अनुसार लिच्चीमा दुई किसिमका विषालु तŒव पाइन्छन्। हाइपोग्लाइसिन ए (एमपिसिए) र मिथायलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन (एमसिपिजी) नामक यी तŒव सुरुमा अफ्रिका र वेस्टइन्डिजमा पनि पाइएका थिए। त्यहाँ पाइने ‘एकी’ फल खाँदा सर्वसाधारणलाई वाकवाकी लाग्ने पाइएको थियो। एकी फलमा भने एउटै टक्सिन एमपिसिए पाइन्छ।
खासमा लिच्ची बगैँचा वरपरका सैयौँ बालबालिकाले लिच्ची खान्छन् तर तीमध्ये केहीलाई मात्र किन यस्तो रोग लाग्यो र ज्यान गुमाउनु पर्‍यो? केहीको धारणामा यसको मुख्य कारण ती बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त हुनु हो।
हुन त राष्ट्रिय लिच्ची अनुसन्धान केन्द्र मुजफ्फरपुरका वैज्ञानिकहरुले लिच्ची खाँदा बालबालिकाको मृत्यु नै हुने सम्भावनालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेका छन्। केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक सुशीलकुमार पुरबेले ‘द एसियन एज’सँग कुरा गर्दै अध्ययन अधुरो र विरोधाभाषपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए।
जुन बेला यी घटना घटेका थिए र सयौँ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो, त्यसपछिको पूरै परिदृश्य परिवर्तन भइसकेको छ। सन् २०१६ मा ६० जना बालबालिकालाई मात्र लिच्ची खाएको आशंकामा अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो। तर यस शोध प्रकाशित भएपछि भने संसारभर हलचल मच्चिएको छ। सर्वसाधारणको मनमा संशय उत्पन्न भएको छ। विज्ञहरूले यसबारेमा अझै खोज र अनुसन्धान आवश्यक भएको र लिच्ची खाएकै कारणले बालबालिकाको मृत्यु हुनु अनौठो घटना भएको टिप्पणी गरेका छन्।
लिच्चीका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको होइन भने आखिर के कारणले तिनको ज्यान गएको हो त? संसार चकित छ!
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ १०:११ आइतबार